Ampifandraiso amin'ny lalana mankany amin'ny fahombiazana | Martech Zone
Zoma, Martsa 12, 2010 Alahady, Aogositra 19, 2012 Ellen Dunnigan
Miomana ara-tsaina ireo mpandidy amin'ny fandidiana. Ireo atleta miomana ara-tsaina amin'ny lalao lehibe. Ianao koa dia mila mahazo psyched momba ny fotoana manaraka, ny antso varotra lehibe indrindra na ny fampisehoana.
Fampandrosoana fahaiza-manao fifandraisana lehibe hampiavaka anao amin'ny sisa fonosana. Eritrereto izay fahaizana ilainao:
Teknika fihainoana mahay - Tena fantatrao ve izay ilain'ny mpanjifanao ary maninona? Inona ny fanaintainany? Afaka maheno azy amin'ny zavatra lazainy sy ny fomba filazany azy ve ianao?
Fitenenana misy ny feo - Fantatrao ve hoe rahoviana no tokony hitaratra ny fitenin'ny mpanjifanao? Moa ve ny fitenin-tenanao mametraka ny feon'ny fifandraisana tsara kokoa na matetika kokoa amin'ny mpanjifanao?
Intonation marina sy ny tahan'ny fitenenana - Manentana ny angovo sy ny hetsika ataon'ny mpanjifanao ny fomba firesakao? Sa mahita ny mpanjifanao misaraka amin'ny lohahevitra hafa na mankaleo amin'ny vokatrao / serivisinao? Moa ve ny mpanjifa mahazo fa ny vokatrao na ny serivisinao dia mamaha ny alahelony?
Fanaraha-maso mahery vaika, mandresy lahatra - Misy heriny ve ianao? Mampitony ny olona ve ny feonao ka miteny malalaka aminao momba ny fanaintainany? Sa ianao mihenjana, mitebiteby, tsy milamina, misento, miadana na mankaleo?
Efa fantatrao ny hafatra tianao ho ren'ny mpanjifanao. Izay no ampahany mora. Ary na firy na firy na firy ianao no miteny ny haavon'ny 60 segondra anao na mandalo ny entanao mivarotra dia misy olona izay tsy hifandray amin'ilay hafatra; tsy hanao izany izy ireo azoko. Ny iray amin'ireo antony dia satria, amin'ny ankapobeny, ny feon'ny hafatrao dia hanako fotsiny rehefa IZAY lazainao sy ny Fomba ilazanao azy fa mifanaraka.
AHOANA no ilazanao fa ny hafanao dia mampisy fahasamihafana rehetra
Ary misy zavakanto amin'izany. Alohan'ny handehananao mankany amin'izany antso lehibe manaraka izany dia eritrereto ny fahatsapana tianao hialana amin'ny mpanjifanao; ny fihetsem-po tianao hizarana. Ohatra, diniho fa mety te-hanomboka amin'ny hafatra mafana sy sariaka ianao ary manaraha amin'ny hafatra matoky, mahery, na manan-kery.
Ny fahatsapana tsirairay tianao hampitaina dia azo aseho amin'ny endrika tsirairay
Sary na sary an-tsaina
Fitoviana amin'ny vatana
Miomàna amin'ny antsonao ka alao antoka fa mifanentana amin'ny hafatrao ny fomba fifandraisanao (ny FOMBA). Hanombohana hafatra mafana sy mahafinaritra:
Mieritrereta teny lehibe iray izay manetsika fihetseham-po mafana sy sariaka: malefaka, tony, tara-masoandro, milay. Avereno imaso imbetsaka amin'ny tenanao io teny manan-danja io miaraka amin'ny fanamafisana mandra-pahatsapanao azy.
Alao sary an-tsaina ny sary ara-tsaina. Alao sary an-tsaina ny famihina zaza na ny vadinao, mifono lamba firakotra eo am-patana, mandehandeha eny amoron-dranomasina amin'ny masoandro mamiratra. Ataovy mazava sy mazava ny sary.
Ovao ny feon'ny feonao amin'ny fanovana ny tonon'ny vatanao sy ny toeranao. Mitsiky. Miresaka amin-kery amin'ny fomba mahery. Move. Ataovy Lehibe ny fihetsehanao.
Ary hanohy amin'ny hery sy ny fitaomana:
Mieritrereta teny iray fanalahidy izay miteraka fahatsapana hery sy fitaomana: matanjaka, mafy orina, matoky tena
Alao sary an-tsaina izany fomba izany. Alao an-tsaina ny maha-mpitantara tantara lehibe indrindra anao, na ny mpanazatra lehibe indrindra, komandy manao fanamiana, NY manam-pahaizana miresaka amin'ny mpijery mifatotra amin'ny teny rehetra nataonao. Alao sary an-tsaina izao ny tenanao manome ny hafatra kasainao. Alao sary an-tsaina ny tenanao milamina, voafehy, ao amin'ilay faritra.
Fitenin-tena: Raha te ho matanjaka sy manan-kery ianao dia mijoroa. Fihetsika tonga lafatra. Mampiasà fihetsika mahery amin'ny tanana. Aza mandehandeha be. Aza hadino ny mijery maso tsara. Aza mijery zavatra ao amin'ny efitrano; olona ihany. Rehefa miresaka an-telefaona dia aza avela hirenireny ny masonao. Mifandraisa amin'ny sarin'ny olona… mifampiresaha aminy.
Fanamafisam-peo amin'ny asa aman-draharaha mpanorina sy Tale jeneraly Ellen Dunnigan dia mpanazatra eken'ny firenena ary voaporofo amin'ny fiofanana manokana amin'ny fanatsarana ny feo, kabary ary ny fanatsarana ny anglisy. Manana mari-pahaizana master in Speech-Language Pathology ary efa voamarina fa mahay ara-pahasalamana avy amin'ny American Speech-Language Hearing Association.
Aza avela ho tonga fampijaliana rano Shinoa ny fampielezan-dronganao